, teo amin’ny PK 24 an’ny lalam-pirenena
RN1 bis, amin’ny tetezan’ny reniranon’ny Sakay, eo amin’ny kaominina ambanivohitra Ankadinondry,
ao anatin’ny distrika Tsiroanomandidy, fiara salantsalany iray nitondra kisoa no tapaka hisatra raha
iny hidina ihazo ny tetezan’io reniranon’ny Sakay io.Nirifatra izay tsy izy ilay fiarakodia tsy nisy tsako kodiarana ka tsy voafehin’ny mpamily ary nidona tamin’ny sisin-dalana. Vokany naratra ilay mpanamory 59 taona avy eny Itaosy Atsimondrano. Naratra torak’izany koa ireo biby fiompy izay nentiny, simba tanteraka ilay fiara. Nidina teny an- toerana nanatanteraka ny fitsirihana ny mpitandro filaminana avy ao amin’ny tobim-paritry ny zandarimariam-pirenena Ankadinondry. Nalefa namonjy ny ivon-toeram-pitsaboana ao amin’ny CSB II Ankadinondry ilay maratra. Ny zandarin’Ankadinondry ihany no misahana ny famotorana.